musha > Tranride
Nguva yekuverenga: 6 maminitsi Green parks, vanofamba munzira mumakomo, uye mamiriro ekunze akasununguka akakwana nekuda kwekunakidzwa kwekunze. Maguta eEuropean cosmopolitan ane zvese saka unogona kuyedza zvese zvekunze zviitiko zvinopihwa ne Europe. Kubva ku cycling ku Amsterdam kusvika kumafashoni muMunich, izvi 7 maguta akanakisa…
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi Rokufambira ndiye uchinzvera asi unofanira kuzviita zvirongedzere mukwende wokutapwa nawo vakasununguka, kunyanya layovers kana kana iwe chete kuva akasununguka zuva muna rimwe remaguta Germany yakakurumbira. Tine ruzivo rwese rwaunoda kwenzvimbo dzekuruboshwe dzemitoro kuGerman kwevatatu…
Nguva yekuverenga: 6 maminitsi Naples chinhu chinoshamisa, quintessential Italian dhorobha. Rakazara zvikomo, zvivako akare, uye nezvimwe duku uye akanaka zvinoshamisa. Zviri chezvematongerwe Vakakwana Italian mutaundi wose anoda kuona echokwadi Italian mweya uye yakanakisisa zuva nzendo kubva Naples. zvisinei,…
Nguva yekuverenga: 6 maminitsi Florence chinhu chinoshamisa nzvimbo mutsigiro pane matani kuita. asi, kana muchitsvaka kuti asingashumbi mberi guta rino, tine iwe akafukidzwa. Kune dzimwe nzvimbo zvinoshamisa kuti kushanya kuti dzinongova chitima kukwira kubva Florence. pano…
Nguva yekuverenga: 7 maminitsi Pane zvinhu zvakawanda Paris anozivikanwa. Asi zvinhu Free kuitei Paris hachisi chinhu inozivikanwa kuti. Zviri inozivikanwa nokuva mumwe zvikuru kudanana nzvimbo munyika. A fashoni guru uye mabhuku paradhiso kunyange!…
Nguva yekuverenga: 6 maminitsi Europe anofuridzira vemifananidzo uye firimu pasi pose, saka hazvishamisi kuti Kunokwezva firimu Vagadziri zvakafanana! Discover 5 Famous Film Places muEurope uye bhuku mazororo dzako uye mabasa kunyudza pachako rwaunofarira mafirimu kuti akakwana zororo pamwe European…